Muranka horjooge Siciid Deni iyo Axmed Karaash oo u wareegay baraha bulshada - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Muranka horjooge Siciid Deni iyo Axmed Karaash oo u wareegay baraha bulshada
Dhawaan ayay ahayd markii uu sii xoogeystay muranka dhinaca siyaasada ee horjooge Siciid Deni iyo ku xigeenkiisa Axmed Karaash. Muranka ayaa ku qotoma keli talisnimo ka timi horjooge Siciid Deni iyo maamulkii oo uu isagu isku koobey.
Axmed Karaash ayaa muujiyay inaanu raali ka ahayn kelitalisnimo oo uu cadkiisa goosan doono. Waxa qooshka sii walaaqay tacsi lagu qorey bogga faysbuug ee madaxtooyada Butlaan uuna qorey Axmed Karaash oo laga saaray.
Axmed Karaash ayaa la sheegayaa inuu dalbadey in loo sameeyo bog uu ka hadlo, waxana isla xalayba la sameeyay bog ay markiiba ku xirmeen 30 kun oo qof.
Halka bogga horjooge Siciid Deni ay ku xiran yihiin 42 kun oo qof taas oo ka dhigan in Axmed Karaash durba la soo baxay wacdaro aanu fileyn Siciid Deni.
Si kastaba ha ahaatee muranka labada nin oo taageereyaasha horjooge Siciid Deni ku tilmaameen mid aan meel fog gaarayn waayo ay yiraaheen tirada Majeerteen ku leeyahay maamulka, ayaa la ogeyn halka uu ku danbeyn doono.
”Anigu welli ma arag Dhulbahante hal meel ka soo wada jeeda, waxa loo kala goostey labada maamul ayuu yiri Cali Calasow